Waqooyiga Kuuriya oo toogasho ku fulisay sarkaal sare - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldWaqooyiga Kuuriya oo toogasho ku fulisay sarkaal sare
September 1, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya, Kim Jong-un, Sawirka: EPA.
Seoul-(Puntland Mirror) Waqooyiga Kuuriya ayaa toogasho ku fulisay mid kamid ah raysulwasaare ku xigeenkeeda, sida ay sheegeen saraakiisha Koonfurta Kuuriya.
Xukuumada Pyongyang ayaa sidoo kale masaafurisay saraakiil sare, waxaa loo malaynayaa in amaarkaas uu bixiyay hoggaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un.
“Raysulwasaare ku xigeenka waxbarashada Kim Yong-Jin ayaa toogasho lagu fuliyay,” sidaa waxaa yiri Jeong Joon-hee, afhayeenka wasaarada midowga Koonfur Kuuriya.
Kim ayaa toogasho lagu fuliyay bartamihii bishii July isagoo lagu eedeeyay kasoo horjeed xisbiga iyo kacaandoon, sida uu wakaalada wararka ee AFP u sheegay sarkaal magaciisa ka gaabsaday.
Bartamihii bishii Febaraayo, taliyaha guud ee ciidamada, Janaraal Ri Yong-gil ayaa la sheegay in la dilay isagoo lagu eedeeyay musuq-maasuq, sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Koonfur Kuuriya. Yonhap
Kim Jong-un ayaa awooda Waqooyiga Kuuriya qabsaday sanadkii 2011 kadib dhimashadii aabihiis, Kim Jong-il.
Ganacsade lagu dilay magaalada Gaalkacyo
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa xabsiga ka sii deysay Cabdirisaaq Xuseen Tahliil oo loo yaqaan Coloolgeel, taasoo noqoneysa markii labaad oo xabsiga laga sii daayo tan iyo sanadkii 2014-kii. Siidayntiisa ayaa timid kadib wadaxaajood dhexmaray madaxda [...]